I-ESA izoziqeqesha eLanzarote ukuze ikoloni leMars | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-ESA izoziqeqesha eLanzarote yekoloni leMars
Inqubo yokwenziwa komhlaba ngokuzenzisa
Izindaba ezintsha, ezivela ku- I-European Space Agency (ESA) emncintiswaneni wesikhathi esizayo wokukhiqiza iMars. Ngasohlangothini lwezikhungo nezinkampani ezahlukahlukene, kunenselelo okumele izuzwe, ukubaluleka kokuba ngowokuqala ukuzuza amakoloni, kuyinto engaphezulu kokuziqhenya, yilokho okuzobhalwa ezincwadini zomlando. Isifiso esinesifiso sokuphinda senze indawo yaseMartian, sisezindaweni ezingenabungani, ezinobutha noma eziyinqaba emhlabeni wonke. Esinye sezizathu zokuthi kungani ILanzarote ikhethwe, ngenxa yendawo yayo ehlukile futhi ifana neplanethi ebomvu.
Umgomo wokugcina lapho konke ukuhlolwa nemizamo kugxila khona "I-Terraforming ye-Mars". Un iphrojekthi yobunjiniyela beplanethi inhloso yawo ukuguqula yonke iplanethi ibe yizimo ezicishe zifane noMhlaba. Esinye sezinyathelo zokuqala ukwakha indawo enhle lapho abantu bangahlala khona ekuqaleni. Sisanda kubhala nge- a Idolobha lesikhashana lakhiwa eDubai. Manje sekuyithuba likaLanzarote.
IPangea yigama lephrojekthi yolwazi lapho osomkhathi bezololonga khona ngomshoshaphansi, okungenye yezindlela ezingokoqobo ezicatshangelwayo. Isizathu esikhulu ukuthi izinga lobunzima obukuMars ekuqaleni luzoba phezulu kakhulu. Enye yezindawo eziphephe futhi ezinengqondo kunazo zonke zokuhlala kwabantu ukuhlala kwelinye lamashubhu amaningi odaka noma imihume eMars. Izindawo ezifana nalezo ezitholakala eLanzarote.
Izinsuku ezi-5 ngoNovemba, lo mkhankaso uzomphelezela Abantu abangama-50, izivivinyo eziyi-14, izinhlangano eziyi-18, nezinhlangano ezine zesikhala. Futhi ababambiqhaza ezinye zezihambeli ezivela ku-ESA's mission ye-ESA, elungiselela ukuthumela irobhothi lokuhlola eMars ngo-2020. Irobhothi elihambisana nekhamera enesinqumo esiphakeme kanye nephakheji yenzwa yokukala umhwamuko wamanzi kule ndawo okulindeleke ukuba ibe mnyama ngokuphelele.
Njengenjwayelo, sizoqhubeka nokubika inqubekelaphambili efanelekile ekunqobeni iMars, into esingangabazi ukuthi, siyethemba ukuthi singaphila futhi siyifakazele. Ngaphandle kokungabaza ingqophamlando emlandweni wesintu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » I-ESA izoziqeqesha eLanzarote yekoloni leMars
Ngokufudumala komhlaba, ukungezwani komzimba kuyanda